Ibsa ADO mana hidhaa Qilinto ilaalchisee : Oromo Democratic Front
Posted by ODF on Tuesday, September 6, 2016 · Leave a Comment
Hagayya 5, 2016
Erga manni hidhaa naannoo magaalaa Finfinneetti argamu kan matootiin hoogganaa bebbeekamoon akka Obbo Baqqalaa Garbaafaa keessatti argaman gubatee kunoo ar’a guyyaan sadi darbeera. Haa ta’u malee mootummaan Itiyoophiyaa haala hidhamtooti kun keessa jiran maatii fi firoota isaanii waa takkallee hin hubachiisin jira. Haa du’an haa jiraatan kana jedhee waan hime hin qabu.
Haalli biyya sana keessa jiru yeroo kam irra gar-malee hammaachaa jira. Diddaa uummataa ukkaamsuuf namoota kumaa ol ta’an ajjeesuu fi kumaatamaan kan lakkaawaman hidhuun, qabsoo fi mormii cimsaa, haala nageenya biyyattii ammo dukkaneessaa jira. Egereen mootummaa biyyattiis qarqara badiinsaarra waan gahe fakkaata.
Mootummichi ibsa baasuu haa dhiisu malee maddi oduu adda addaa fi social median biyyattii keessa jiran badii ibidda kanaan hidhamtootarra gahe keesumaa huu dhukaasa banameen miidhaa gahe ilaalchisee oduu lakkoofsaan guutame baasanii ummataaf dhiheessaa jiru. Haala amma dhalate kanaan lubbuun ogganoota bebbeekamoo kun kan gaaga’amu yoo ta’e dhullaan biyyattii dhohuun isaa waan hin oolleedha. Mormii fi diddaa sabni Oromootiif sabni Amaaraa, kan uummata biyyattii keessaa herregni isaanii dhibbantaa jahatamii shan (65%) caalu, mootummaan Itiyoophiyaa lamshesuu fi dhabamsiisuu dadhabaa dhufuun isaa waan amma uumame kanaan waliitti ida’amee rakkoo guddaa uumuun isaa waan hin oolleedha.
1. Sabni Oromootii fi uummanni Itiyoophiyaa hundi humna, qabeenyaa fi dandeettii qaban hunda waliitti kuusuun, wareegama feesisu baasuun mootummaa saba seera biyyatti irratti hundaawee nagayaan mirga isaa mormachuuf hiriire gara jabinaan hidhaa, dararaa fi ajjeesaa jiru kanarratti tarkaanfii laalataa fudhachuun gocha isaa kana tokkummaan ol ka’ee akka dhabamsiisuuf waamicha goonaaf;
2. Mootummaan Itiyoophiyaa haala amma dhalate kanaan balaa fi badii gahe ilaalchisee ibsa lakkoofsaa fi eenyummaa namoota alaakamanii dabaalame hatattamaan akka baasu, akkasumas maatii fi firoottan hidhamtootaa mana hidhaa dhaqanii jaalalloo fi firoota isaanii dubbisuuf akka danda’an hayyama akka kennuuf waamicha goonaa;
3. Hawaasni addunyaa akasumas biyyoleen ollaa Itiyoophiyaa jiran hundi mootummaan kun gocha isaatii fi badii amma biyyattii keessatti mul’ataa jiru qaama walaba ta’een qoratamee dhugaan isaa akka ifa bahu hayyama akka kennu dhiibbaa cimaa akka irratti godhaniif waamicha goona.
Bilisummaa if haqa uummata hundaaf!
Adda Diimookratawaa Oromoo (ADO)